“Waxaan Ilaahay Uga Barayayaa In Doorashadu Jabuuti Ugu Dhacdo Si Nabadgelyo Ah Oo Xor Ah” | Somaliland.Org
January 31, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Marwada Koowaad ee Somaliland ahna Marwada Madaxweynaha Marwo Aamina Maxamed Jirde, ayaa guul u rajaysay Madaxweynaha Jamhuuriyada Jabuuti Md. Ismaaciil Cumar Geelle oo isu soo taagaya markii sadexaad doorashada madaxtinimada dalkaasi. Ka dib markii isbahaysiga uu Hoggaamiyaa ay mar kale ka dalbadeen inuu noqdo murashaxooda uga qeyb galaya tartanka doorashada.
Marwo Aamina Waris waxa kale oo ay sheegtay inay rajaynayso in doorashadaasi ay ugu dhacdo wadanka Jabuuti si nabadgelyo ah oo dimuqraadiyadi ku jirto, sidaasna waxay ka sheegtay hadal ay ka jeedisay xaflad lagu qabtay Huteelka Maansoor ee Magaalada Hargeysa oo haweenka reer Somaliland ay ku taageerayeen murashaxnimada Madaxweyne Geelle.
“Waxaan Salaan iyo duco aan la soo koobi karin aan u diraynaa walaalkeen Madaxweynaha Jamhuuriyada Jabuuti Md. Ismaaciil Cumar Geelle, oo shacbigiisu markii sadexaad u soo bandhigeen inuu isu soo sharaxo tartanka doorashada dhawaan ka dhici doonta dalkaasi, waan ugu hambalyaynaynaa arrintaasi Madaxweynaha,”ayay tidhi Marwo Aamina Waris.
Marwada koowaad oo hadalkeeda sii wadatay waxay intaasi ku dartay “Jabuuti waa dariskeena, waa sokeeyaheen, waxaan ILAAHAY uga barayaynaa inay doorashadu ugu dhacdo si nabadgelyo ah oo xor ah, oo Madaxweyne Ismaaciil-na uu ku guulaysto.”
Marwo Aamina Waris waxa kale oo ay sheegtay in socdaalkii u horeeyay ee weftigii Madaxweyne Siilaanyo ay dalka dibadiisa ugu baxeen ay ka bilaabeen wadanka Jabuuti, waxaanay Madaxweyne Geelle iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd waxaanay tilmaantay inay uga mahad celinayso sidii milgaha lahayd ee loogu soo dhaweeyay dalkaasi.
Sidoo kale, waxa xafladaasi ka hadashay Marwada madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Marwo Raxma X. Muxumed Suldaan, waxaanay sheegtay in Jabuuti ay tahay dal daris ah oo Somaliland ahmiyad siyaasadeed iyo mid bulshaba uu leh. Waxaanay u mahad celisay Haweenkii soo agaasimay xafladan oo ay ku sifeysay mid taariikhi ah.
Marwo Raxma waxay Madaxweynaha Jabuuti ka dalbatay inuu sii xoojiyo cilaaqaadka wanaagsan ee uu Somaliland la leeyahay.
Waxa kale, oo halkaasi ka hadashay Guddoomiyaha Garabka haweenka ee xisbiga KULMIYE ee gobolka Hargeysa Marwo Layla Cismaan, waxaanay dhambaal Hambalyo iyo duco iskugu jiray u dirtay madaxweynaha Jabuuti iyo Marwadiisa.
Waxa xafladaasi lagu soo bandhigay gabayo iyo heeso tiro badan oo lagu ammaanayay hoggaaminta iyo siyaasada Hoggaamiyaha Jabuuti.
Previous PostWasiirka Horumarinta Caalamiga Ah UK Oo Sheegay In 60% La gaadhsiiyay Kaalmooyinkii SomalilandNext PostMIISAANIYADDA 2011 WAXAY KA TURJUMAYSAA BARNAAMAJKII KULMIYE	Blog